Weeraryahankii hore ee Man United Chicharito oo ka soo dhacay Jaran-Jarada aqalkiisa…(Imise ayuu garoomada ka maqnaan doonaa?) – Gool FM
Weeraryahankii hore ee Man United Chicharito oo ka soo dhacay Jaran-Jarada aqalkiisa…(Imise ayuu garoomada ka maqnaan doonaa?)
(Germany) 23 Agoosto 2016. Weeraryahankii hore ee Man United ee iminka u safta Bayer Leverkusen Javier Hernandez ee loo garan ogyahay Chicharito ayaa seegi doona bilowga xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka Bundesliga kaddib markii uu dhaawac ka gaaray gacanta mar uu ka soo dhacay jaran-jaro.
Xiddiga reer Mexico ayaa sida kabtanka kooxda ee Lars Bender oo kale ka maqnaan doona garoomada labo usbuuc iyagoona seegaya kulanka ay kooxdoodu u safri doonto sabtida naadiga Borussia Monchengladbach.
“Kulanka sabtida ee furitaanka Bundesliga ee Borussia Monchengladbach, Bayer waxaa ka maqnaan doona Lars Bender iyo Chicharito,” Warbixin ay kooxda soo saartay ayaa sidaa lagu yiri.
“Kabtan Bender ayaa dhaawac canqowga ah uga baxay ciyaartii finalka ciyaaraha Olympikada ay kala hortageen Brazil, iskaan ayaa la marsiiyay subixii talaadada.
“Chicharito ayaa la dhibtoonaya inuu ka soo dhacay jaran-jarada aqalkiisa habeenkii isniinta, wuxuuna ka jabay laf gacantiisa midig ah, xiddiga reer Mexico ayaa si guuleysatay qalliin loogu sameeyay talaadadii (maanta).
“Sidoo kale lama heli doono kulanka sabtida, ugu yaraan labo usbuuc ayay garoomada ka maqnaan doonaan isaga iyo Bender.”.
Taageerayaasha Celtic oo ku xumeyn ay xiriirka UEFA ku xumeynayaan darteed lacago badan ugu ururiyay FALASTIIN
GOOGOOSKA: Chelsea vs Bristol Rovers 3-2